We Fight We Win. -- " More than Media ": နိင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ဖို့တောင်းဆိုသူကို ထပ်ဖမ်း
နိင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ဖို့တောင်းဆိုသူကို ထပ်ဖမ်း
Ye Min Tun “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ချက်ချင်းလွှတ် ” ဆိုတဲ့ ပိုစတာကပ်လို့တဲ့။
ကိုဝေဖြိုး နဲ့ ကိုဇာနည်ထွန်း ၂ ယောက်ကို၊ ပဲခူးတိုင်း-ပြည်မြို့မှာ
မဟုတ်တရုတ် ပုဒ်မများ (သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်ပုဒ်မ တောင်ပါသေး) တပ်ပြီးတရားစွဲထားပါတယ်။ 28/8/2010 ကအမှု ခုထိ စီရင်ချက်မချသေး။ အချိန်ဆွဲနေပါတယ်။
၅၊၁၊၂၀၁၂ ကတကြိမ် ရုံးထုက်သွားတယ်တဲ့.။
ဇာနည်ထွန်းရဲ့ရှေ့နေက ဦးမြင့်အေး။ဖုန်း ၀၉၄၃၁၅၆၆၀၃။
about 570 political prisoners vs. 60 million people living in Myanmar and who is the most important?
We like U Aye Myint who was on the Myanmar activists' website.
He knows more than Nga Thee does.
7 January 2012 at 06:51
ငါ လိုမသား ကုလား ရဲမင်ထွန်း မလေးရှားမှာနေတုန်းက ဘာတွေလိမ်လည်ပြီး တတိယနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးဆက်လိမ်အုံးမှာလာ မလေးရှားနေတုန်းက စစ်ထောက်လှမ်းရေး သတင်းပေးပြီး မလေးရှားအာဏာပိုင်ပေါင်းတော့ မလေးရှားရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေကို ဒုက္ခပေးတာ ဘာနိုင်ငံရေးသမားလဲ အချောင်နိုင်ငံရေးသမားလာ မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကိုတောင် မလေးရှားရင်ဂစ် ၂၂၀၀၀ လိမ်သွားတာ ငါလိုမသား ရဲမင်ထွန်းကြောင့် မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေ မင်းတို့ မြန်မာတွေက လူလိမ်တွေလို့ အပြောခံရတယ် ငါလိုမသား ကုလား